Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhimatay, tobanaan kalena waa lagu la’yahay musiibadii doontii Bangladesh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bangladesh Wararka Wararka » Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhimatay, tobanaan kalena waa lagu la’yahay musiibadii doontii Bangladesh
Bangladesh Wararka Wararka • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Khubaradu waxay ku eedeeyaan dayactir xumo, heerarka nabdoonaanta ee maraakiibta maraakiibta iyo ciriiriga badan ee dhacdooyinka dilaaga ah.
Dooni rakaab ah ayaa ku degtay haro ku taal magaalada Bijoynagar ee bariga Bangladesh.
Doontii rakaabka ayaa la sheegay inay isku dhaceen markab xamuul.
Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay doontii degtay.
Doon rakaab ah oo sida la sheegay siday in ka badan 60 rakaab ah ayaa ku degtay haro ku taal bariga Bangladesh ka dib markii ay isku dhaceen markab xamuul ah oo rarnaa.
Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhimatay tobanaan kalena waa lagu la’yahay dhacdo ka dhacday haro ku taal magaalada Bijoynagar, sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka.
Cidhifka birta ee markabka xamuulka iyo doonta ayaa isku dhacay, taas oo sababtay in markabkii rakaabka ahaa uu qalibmo, sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka.
Samatabbixiyeyaasha ayaa soo saaray meydadka 21 oo ay ku jiraan sagaal haween ah iyo lix carruur ah, laakiin mas'uuliyiintu waxay ka digayaan in tirada dhimashada ay u badan tahay inay kororto.
Ma cadda inta qof ee saarnaa markabka shilka, iyo inta qof ee weli la la'yahay. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan bilayska deegaanka, dadka badbaaday ayaa sheegay in ilaa 100 qof ay saarnaayeen doonta.
Dad kala duwan ayaa goobta ka baadi goobayay meydad, waxaana gurmadyo looga soo diray magaalooyinka deriska la ah. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale ku biiray dadaallada samatabixinta.
Booliiska ayaa sheegay in ugu yaraan XNUMX qof la geeyay isbitaal deegaanka ah kadib markii laga soo badbaadiyay doontii quustay.
Aagga musiibadu ka dhacday waa 51 mayl (82km) bariga caasimadda, Dhaka. Maamulka deegaanka ayaa sameeyay guddi soo baara shilka.
The dejinta wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee dhacdooyin noocan oo kale ah oo ka dhaca waddanka Koonfurta Aasiya. Bilihii April iyo May, 54 qof ayaa ku dhimatay laba doonyood oo kala duwan oo qalibmay shilal.
Bishii Juun ee sanadkii hore, doon ayaa ku degtay Dhaka kadib markii ay gadaal kaga dhufatay doon kale, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 qof. Bishii Febraayo 2015, ugu yaraan 78 qof ayaa dhimatay markii markab ciriiri galay uu isku dhacay dooni xamuul ah.